Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västra Götalands län / Dals-Ed
Sawir ku yaala tabeele kuna qorantahay Ed iyo muuqaalka guud ee Stora Le xilliga jiilaalka.
Masawirqaade: Christiane Dietz
Degmada Dals-Eds waa degmada fursadaha, degmada keymaha, degmada wax soosaarka dhaqaalaha iyo ugu horreeyntii degmada dadka.
724 kiilomitir oo laba jibaaran
Åmål 72 kiilomitir
Uddevalla 86 kiilomitir
Vänersborg 89 kiilomitir
Trollhättan 100 kiilomitir
Karlstad 144 kiilomitir
Waxeey raad ku leedahay dhaqaalaheena. Shirkado, ganacsade, degmo och heyádaha kaloo dowladda waxeey si wada jir ah ugu shaqeeyaan si loo helo xalka ugu wanaagsan oo u fiican degmada.
Waxaan heynaa hawo iyo jawi nadiif ah iyo dhul dabiici ah oo aan lataaban. Dals-Ed waxeey kuu heeysaa deegaan aamusan oo maanta ah wax eeysan dad badan heli karin. Degmada balliyadeeda oo gaaraya 400 waadka kaluumeysan kartaa, ku dabbaalan kartaa, doonna kuwadi kartaa.
Degmada bartamaheeda oo lagu magacaabo Ed waxaad ka heleysaa guryo la kireysan karo. Dadka qaxootiga ah waxaa jira sharci xaq u siinaya in guryo la siiyo waxaa mas'uul ka ah iskudubbaridaha is dhexgalka dadka kaasoo guryo ugu diyaarinaya shirkadda guryaha Edshus AB​, oo ah shirkad dowladeed. Waxaa kaloo jira shirkadda bostadsbolaget Pineskär​ oo iyadana guryo dadka ka kireysa.
​Iskoolka Snörrumsskolan waxaa loogu tala galay ardayda dhigata fasallada 1-3 iskoolka Hagaskolan ​ waxaa loogu tala galay ardayda dhigata fasallada 4-9. Waxaa kalooo meeshaan yaalla iskoolka hiddaha iyo dhaqanka ee Kulturskolan i Ed, waxaana loogu tala galay in carruurta iyo dhalinyaradda sida u wanaagsan loo jecleeysiiyo waxyaabaha la xiriira dhaqanka. Cunug kasta waxaa la siinayaa fursad uu ku barto sida loo cayaaro qalabka muusikada, sida loo heeso iyo sida loo dheelo.
Iskoolka Snörrumsskolan waxaa loogu tala galay ardayda dhigata fasallada 1-3 Iskoolka Hagaskolan waxaa loogu tala galay ardayda dhigata fasallada 4-9 Iskoolka dhaqanka Kulturskolan kuna yaala Ed Dugsiga sare ee Utsikten gymnasium Dugsiga caruurta laxaadkoodu kala dhantaalanyahay ee Utsikten
Shaqooyinka ka banaan gudaha Dals-Ed